भारतीय राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणः ३ दिन कुन-कुन रुटमा सवारी चलाउन पाइँदैन ? – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / भारतीय राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणः ३ दिन कुन-कुन रुटमा सवारी चलाउन पाइँदैन ?
भारतीय राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणः ३ दिन कुन-कुन रुटमा सवारी चलाउन पाइँदैन ?
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर October 31, 2016	Comments 426 Views
१५ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउने दिन दिनभर सडक खाली गरिने भएको छ ।
बिहान पौने १० बजेदेखि दिउँसो पौने २ बजेसम्मः बौद्ध, मित्रपार्क, चावहिल, गौशाला, एयरपोर्ट, तिनकुने, नयाँबानेश्वर, माईतीघर, सिंहदरबार,भद्रकाली, थापाथली, कोटेश्वर, पुरानो बानेश्वर,शंखमुल, नागस्थान, न्युरोड क्षेत्रसम्म
दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म बौद्ध, मित्रपार्क, चावहिल, गौशाला, एयरपोर्ट, तिनकुने, नयाँबानेश्वर, माईतीघर, सिंहदरबार, भद्रकाली, पुरानो बसपार्क, थापाथली,जोरपाटी, कोटेश्वर, पुतलीसडक, प्रर्दशनीमार्ग क्षेत्रसम्म
साँझसाढे ६ बजे देखि बेलुकी साढे ८ बजे सम्मः बौद्ध, मित्रपार्क, चावहिल, गौशाला, एयरपोर्ट, तिनकुने, नयाँबानेश्वर, माईतीघर, सिंहदरबार, केशरमहल, लैनचौर, लाजिम्पाट, दरबारमार्ग, घण्टाघर, पुरानो बसपार्क, थापाथलि, जोरपाटी, सोह्रखुट्टे, जय नेपाल, कोटेश्वर, पुरानो बानेश्वर ,शंखमुल क्षेत्रसम्म
बेलुकी पौने ८ बजेदेखि पौने १० बजेसम्मः बौद्ध, मित्रपार्क, चावहिल, गौशाला, एयरपोर्ट,बत्तिस पुतली क्षेत्र
बिहान ९ बजेदेखि ११ बजे सम्मः बौद्ध, चुच्चेपाटी, चावहिल, मित्रपार्क, गौशाला, तिलगंगा, एयरपोर्ट ,तिनकुनेसम्म
Previous: आज गोबर्द्धन तथा म्हः पूजा
Next: ओलीको प्रश्नः जनताले राजा फ्याँके, भारतबाट आएका जोगीले राजतन्त्र फर्काउँछ?